कल्पना केसी क्षेत्री - नारी
कल्पना केसी क्षेत्रीका लेखहरु
२०–२५ वर्षसम्म खाई–नखाई दुःख गर्दै कहिल्यै रुन पनि नदिई हुर्काएका सन्तानले आज मेरो फुर्सद छैन भन्छन् । आफ्ना छोराछोरीको ख्याल गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ पनि भन्छन् । ती सन्तानले किन र कसरी भुल्न सक्छन्, कति छिटो भुल्न सक्छन् ? ती बूढी आमा हाम्रो सेवामा छिट्टै बूढी अनि रोगी भा’की छिन् । आमा छोरीको घरमा किन बस्न नहुने ? छोरी पनि त्यही कोखका सन्तान होइनन् र ?
कल्पना केसी क्षेत्री, जेष्ठ १४, २०७६
मानिसहरू आफ्नो जन्म दिनको निकै सम्झना गर्छन् तर तिनै जन्म दिने आमाको कहिल्यै सम्झना गर्दैनन् । यही विषयलाई लिएर सम्झनाका शब्दहरू कोर्न मन लाग्यो । त्यो दिन साँच्चिकै दर्दनाक एवं पीडादायी दिन थियो । त्यो दिन अस्पतालसम्म जान नसक्ने स्थिति वा वातावरण थियो ।
कल्पना केसी क्षेत्री, जेष्ठ ४, २०७६